Thursday December 17, 2009 - 09:54:46 in Community Listing by Super Admin
Maaxaay ayaa waxuu fasax gaaban ku tagay Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya si uu si arko xaalada dadka ku sugan ee jooga. Maalintaas waxaan la kulmey dhamaan dadkii xanuunsanaa ee u joogay Nairobi xaalad caafimaad. Waxuu si gooni ula kulamay Ahmed
Maaxaay ayaa waxuu fasax gaaban ku tagay Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya si uu si arko xaalada dadka ku sugan ee jooga. Maalintaas waxaan la kulmey dhamaan dadkii xanuunsanaa ee u joogay Nairobi xaalad caafimaad. Waxuu si gooni ula kulamay Ahmed iyo Zakaria iyo dhamaan dadki kale ee u joogay daawaynta. Maalintaas waxaa Maaxaay u suurto gashey inuu tago Isbitaalka lagu daaweyey.